Rosario de Yauca: Virgin nke Iqueña nke Peru | Akụkọ Njem
Rosario de Yauca: Virgin Iqueña
Maria José Roldan | | Peru
Enwere ọtụtụ ndị mmadụ nwere nnukwu agụụ maka Rosario de Yauca: La Virgen Iqueña. Ọ bụ Virgin na ọtụtụ ndị kwere ekwe, ha na-eche na ha nọ nso n'oge kachasị njọ na oge kachasị mma, ha na-eche na Rosario de Yauca, ahapụghị ha ma na-enyefe ha ike mgbe ọ bụla ha chọrọ ya. Ọ bụ nwa amaala a ma ama na Peru, n’obodo Ica.
1 Nsọpụrụ onye nsọ dị nsọ nke Ica
2 Banye ebe nsọ abụghị ọrụ dị mfe
3 Ahụmịhe pụrụ iche maka ndị na-efe gị
4 Rosario de Yauca: Virgin Iqueña
Nsọpụrụ onye nsọ dị nsọ nke Ica
Weekendbọchị izu ụka mbụ nke Ọktoba bụ ụbọchị iguzosi ike n'ezi ihe na ịdị n'otu maka ndị Ica na Peru, dịka a na-eme nsọ nke ịdị oke mkpa dịka Virgin of the Rosary of Yauca, onye ebe nsọ ya dị na mpụga obodo ahụ na ebe omenala bu iga njem. Nke a njem uka dị ogologo ebe ọ bụ na ọ dịruru ihe dị ka awa 6, ma ndị na-efe ya na-eji obi ụtọ na obi ụtọ eme ya.
Satọdee izizi nke Ọktọba, kpọnwụrụ akpọnwụ iji kwanyere onye nlekọta ya ùgwù. N'ụbọchị a dị mkpa, ndị mmadụ juputara n'okporo ámá, bọs na ndị mmadụ na-abịa n'obodo ahụ ịsọpụrụ onye nsọ na-enweghị nchebe na enweghị oke ọ bụla na-aga ebe nsọ Yauca.
Banye ebe nsọ abụghị ọrụ dị mfe
Ebe nsọ ahụ dị na eriri afọ nke oké nkume, aja na ọzara na-adịghị agbanwe agbanwe. O siri ike ịgafe, ọbụlagodi ụgbọ ala kachasị mma nwere nsogbu ịnweta ya. Kaosinadị, ihe ịma aka na nkwa nke onye kwere ekwe bụ ịgafe obodo ahụ, gburugburu ya na ọzara ahụ ekwuru na mbụ iji ụkwụ.
Usoro sara mbara n'otu uzo bu aru nke ndi na-efe ofufe ndi na-aga otutu n'ime otu, kwupụta ebe nsọ ahụ. Obi abụọ adịghị ya na nraranye ahụ na ọchịchọ ịbịarute, otu mmetụta ahụ na-eme ka ndị mmadụ dị n'otu maka Virgin bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya. Maka ha, ọ na-eju ha obi ma na-enwe afọ ojuju n'agbanyeghị nsogbu.
Bọs jupụtara na ndị chọrọ inye nsọpụrụ nke ndị na-elekọta ha. Busgbọ ala ndị a dị ka ndị njem ụgbọ ala ma na-aga n'okporo ụzọ ndị ọzọ na nke ndị njem ala nsọ, bụ ndị na-eme ka obodo ahụ tọgbọrọ n'efu, na-ahapụ ya ka ọ tọgbọrọ n'efu, na-ebuga ndụ ha n'ọzara kpọrọ nkụ nke na-echere Virgin ya.
Ahụmịhe pụrụ iche maka ndị na-efe gị
Ahụmịhe na-adọrọ adọrọ bụ ibi ndụ n’obodo dum na-apụ apụ maka ememme okpukpe, nke na-apụ n’omume ya ịza oku nke Chineke, omenaala ndị obodo ukwu hapụ ịhapụ ka ha gaa n’ihu na ndụ ha na-adị aghara kwa ụbọchị. Ica mara mma karịa ka ọ dị na ụbọchị ahụ, mgbe ọ na-agbapụta n'okporo ámá ya iji gaa ihe ncheta okpukpe nke dịpụrụ adịpụ, Ewepu ciment na mkpọtụ nke na-enye mkpụrụ obi nsogbu, dị nso na okike, ebe ndụ dị karịa ka ị chere. Ndị mmadụ na-ezukọ maka otu ebumnuche, ịsọpụrụ Virgin Iqueña, onye na-esonyere ha n'ime afọ niile n'ime obi ha.
A na-achụ ụzọ njem njem nsọ gaa ebe nsọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnụ ụtọ njupụta nke ngalaba nke Ica mgbe ahụ nke ahụ bụ oge kachasị mma, n'ihi na a ghọtakwara ụzọ gị dị ka njem nlegharị anya, ebe ọ na-agafe n'etiti obodo ahụ; mpụga ozugbo bụ ndị haciendas; na mpaghara ime obodo Los Aquijes; ọzara nke di n’okpuru kpakpando mara mma nke jupụtara na kpakpando; na ógbè Yauca del Rosario, nke aha ya bụ n'ihi nwa agbọghọ na-amaghị nwoke nke ememme ahụ na ebe ụlọ nsọ ya dị. Imara ọtụtụ mpaghara Ica maka njem okwukwe a, ebe na mgbakwunye na ịdọpụ uche gị ị nwere ike ịmụ banyere echiche okpukpe nke obodo nke na-abụghị nke ọdịnala oge gara aga. N'ọnwa Ọktọba ihu ihu kacha mma nke Ica bụ n'ihi okpukpe ya.
Ọ bụ na mbido narị afọ nke iri na asatọ mgbe, n'etiti ọzara Yauca, a hụrụ Virgin ahụ n'etiti ọhịa ndị mmadụ atọ bi n'obodo ahụ, ma nwee ike ịtụgharị uche na nke mbụ ihe ha na-akpọzi ugbu a: "Nwanyị Nwanyị Anyị na Rosary" ma nwee nwa Jizọs n'aka ya na chaplet na-aka aka ya. Ihe oyiyi a dị ihe dị ka 60cms dị elu ma hapụ ndị furu efu n'ọzara Ica.
Dika ihe akaebe si dị, nke a mere na Satọde mbụ na Ọktọba, kpọmkwem na Ọktoba 3, 1701. Ọ bụ ya mere na ọ bụ site na ụbọchị ahụ ka a na-eme na Satọdee mbụ na Ọktọba nke afọ ọ bụla na ndị niile na-efe ya na-eme njem site n'ọzara ịsọpụrụ ụbọchị ahụ dị ebube, ebe enwere ike ịchọta Virgin na ọtụtụ, napụtara n'aka tọgbọrọ n'efu.
Echefughi ndi choro Virgin, ma ta ha ka bu oke mmadu icheta maka ndi obodo nile. Aha ndị a bụ: Nicolás Ortega, Diego Gutiérrez na Francisco Córdova. N'ihi ndị ikom atọ a, a napụtara Virgin Iqueña ma taa ndị niile na-efe ya nwere ike ịsọpụrụ ya.
Mgbe ha chọtara ya, ha chere maka ịfefe ya na Ica mana mgbe ha gbalịrị ibufe ya, ha enweghị ike ịme ya, mana nke a yiri ka ọ bụghị ihe ndabakọ.. Ndi mmadu ndi gbaliri ibuli ya ma ha enweghi ihe ịga nke oma, kowara nka dika na Nwa agbogho achoghi ka ebughari ya ma choro ka ya na ha biri iji chebe ha site na mgbe achoputara ya dika ihe oma nke gosi ha n'anya. Ọ bụ uche nke Nne nke Chukwu ka ọ nọrọ n'ọzara ahụ na ọ bụ ya mere ha ji wuru ụlọ ụka maka ekele ya maka Calitxo Muñoz. Mgbe ekpere gasịrị, a dọrọ Virgin ahụ gaa n'ụlọ ọhụrụ, n'ụlọ nsọ ya ugbu a. Akụkọ a gbasara n’obodo niile, kemgbe ahụ ndị bi na ya na-asọpụrụ Virgin nke Yacua ndị mere ya onye nchebe ha ruo mgbe ebighị ebi.
Ọ bụrụ na ị gaa obodo a na Peru, egbula oge ime nke a iji nọrọ na Satọde mbụ na Ọktọba n'ihi na ụzọ ahụ, ị ​​ga-enwe ọ enjoyụ dị ukwuu maka ntinye aka na Virgin. You ga-enwe ike ịnụpụta ịhụnanya nke ndị obodo ha maka ha na otu obodo si ejikọ mmetụta ha ọnụ iji sọpụrụ ya, na-ahapụ obodo ahụ nke ndị bi na ya dịka onye ọ bụla na-aga ebe nsọ iji sọpụrụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » America » Peru » Rosario de Yauca: Virgin Iqueña
Ekele dịrị gị taaca maka ihe ọma niile emere gị ma daalụ maka ịgọzi ụmụ gị ndị ọzọ
ọrụ ebube dijo
Ọ bụ ezigbo Virgin nke ukwuu, enwere m okwukwe dị ukwuu na ya, ekwere m nkwa ịga njem njem otu afọ ma ọ dịla afọ 5 na m ga-emezu, ebe ọ na-ege m ntị ma nye ọtụtụ hụrụ n'anya.
Daalụ nne dị nsọ
Mailuu Suu na mmetọ